Geely သည် Semiconductor ကုမ္ပဏီ Crystal Energy - Pandaily
Geely သည် Semiconductor ကုမ္ပဏီ Crystal Energy
Jun 21, 2022, 13:46ညနေ 2022/06/21 14:01:51 Pandaily
တရုတ် ကား ထုတ်လုပ်သူ Geely ၏လက် အောက်ခံ Mike Investment က ဆက်ပြော သည်အစုစု ကိုအတွက် အသစ်တစ်ခု entityတနင်္လာနေ့ ။ မကြာသေးမီက ဖြည့်စွက် မှု အသစ် မှာ Zhejiang Jingenergy Microelectronics ဖြစ်ပြီး Mike က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အချိုးသည် ၈၈% ရှိသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ပြည်တွင်း စီးပွားရေး စုံစမ်း ရေး ပလက် ဖော င်း၏ စစ်ဆေးမှု ခုနစ် ခုက Jingenergy Microelectronics ကို ၂၀ ၂၂၊ ဇွန် ၂၀ ရက် တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် မှာ Pan Yunbin ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသော မြို့တော် မှာယွမ် ၁၀ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၄ ၉၅ သန်း) ဖြစ်သည်။ ၎င်း ၏လုပ်ငန်း နယ်ပယ်တွင် semiconductor discrete devices များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ semiconductor အစိတ်အပိုင်းများ အတွက်အထူး ကိရိယာ များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော circuit chips များ ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ် ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ Maijie Investment မှ ပိုင်ဆိုင် သည့် ၈၈% ရှယ်ယာ မှအပ ကျန် ၁၂% ကို Hangzhou Lichen Enterprise ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ကပိုင် ဆိုင် သည်။
Geely Maijie Investment ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် Xu Zhihao နှင့် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အရင်းအနှီး ယွမ် ၄ ၃၃ သန်း ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ ၅၅% ကို Ningbo Ruima Enterprise Management မှ ပိုင် ဆို င်ပြီး ၄၄. ၇% ကို Geely Technology Group Co., Ltd. မှ ပိုင်ဆိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် Ningbo Ruima Enterprise Management ၏ ၉၉. ၉၉% ကို Geely တည်ထောင် သူနှင့် ဥက္က chairman ္ဌ Li Jiaxiang က ပိုင်ဆိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Geely ၏ မိုဘိုင်းဖုန်း ကုမ္ပဏီသည် Meizu ၏ ၇၉. ၀၉% ကိုဝယ်ယူ ရန်စီစဉ် နေသည်
Geely သည် chip စက်မှု လုပ်ငန်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခြင်း မဟုတ်ပါ။ Suzhou Photonic Matrix ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Integrated Circuit Chip ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို အထူးပြု သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ ၏တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် မှာ Shen Ziyu ဖြစ်ပြီး Geely ၏ ECARX ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် လည်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီကို Hubei ECARX နှင့် Shanghai Guangfei Enterprise Management တို့က ပူးတွဲ ပိုင်ဆိုင်သည်။ ECARX ၏အကြီးဆုံး အစုရှယ်ယာ ရှ င်၊ နောက်ဆုံး အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ် အမှန်တကယ် ထိန်းချုပ် သူမှာ Li Jiaxiang ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Wuhan Lotus Technology ကို ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Integrated Circuit Chip ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ ကိုအာရုံစိုက် ခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်း ၏တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် မှာ Geely Automobile Group ၏ဒုတိယ ဥက္က president ္ဌ နှင့် Lotus Group ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Feng Qingfeng ဖြစ်သည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များအရ Zhejiang Geely Holding Group သည် ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ ၆၀% ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။